मधेशमा न्याय व्यवस्थाको हालत : न्यायिक समितिका सदस्यनै अयोग्य, कस्ताे बन्छ कानून कस्ताे हुन्छ न्याय !! - Nepal Post Daily
मधेशमा न्याय व्यवस्थाको हालत : न्यायिक समितिका सदस्यनै अयोग्य, कस्ताे बन्छ कानून कस्ताे हुन्छ न्याय !!
समितिका संयोजक र सदस्यहरूमा कानूनको ज्ञान छैन, तालिम पाएका छैनन्, कति त निरक्षर पनि छन् । त्यसमाथि अरू कुनै निकायबाट निगरानी नभएपछि स्थानीय तहका न्यायिक समिति अर्थहीन र निकम्मा हुन पुगेका छन् ।’ बारा, पर्सा र रौतहटको स्थानीय न्याय व्यवस्थाको हालत ।
मधेशमा न्याय व्यवस्था
Previous articleप्रदेश २ को बजेटमा भागबन्डा, मन्त्रीकै तलब सात गुणाले बढी
Next articleकाठमाडौंमा चहलपहल बढयो
डेढ वर्षमा बर्दिवास-वीरगन्ज रेल गुडाउने विभागको तयारी
सर्लाही । महोत्तरीको बर्दिवासदेखि पर्साको वीरगन्जसम्मको १३६ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये ७० किलोमिटरभन्दा बढीमा ब्लास्ट र ट्र्याकमा पटरी ओछ्याउने बाहेकका अन्य काम सकिएको छ । बर्दिवासदेखि वीरगन्जसम्मको...